February 2018 | Save A Train
ọnwa: February 2018
Oge Ọgụgụ: 7 nkeji Otu n'ime ndị kasị ewu ewu na ụzọ gasị na njem na Europe bụ site na London na Amsterdam, a ngwa ngwa njem na n'elu 4 nde njem na-eme ka ndị njem kwa afọ. Otu nhọrọ kacha mma maka njem bụ ụgbọ oloko site na Eurostar, ụgbọ okporo ígwè dị elu na-ejikọta abụọ…
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji Interrailing Atụmatụ na-ejegharị ejegharị na a mmefu ego bụ omume ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ njem gị nke ọma. Ọnụ ego tiketi ụgbọ oloko, ulo, nri, na ntụrụndụ na-adịgasị iche iche n'etiti mba na Europe, mana e nwere ọtụtụ ụzọ iji nụ ụtọ njem dị ọnụ-ala. Luckily, na ụfọdụ nkwadebe, okporo ígwè njem…
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji Ma ị lụrụ maka afọ, ma ọ bụ ka nọ n'oge n'ụzọ nke a mmekọrịta, ọ bụla di na nwunye nwere ike irite uru àgwà oge nọrọ ọnụ. Ọ bụ karịsịa mma na-eme ka mgbalị maka Ɛpo Day. Ejegharị ụgbọ okporo ígwè bụ n'ụzọ zuru okè na-amalite…